Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana indray an'i Patrick Henry | Ron Paul - Fikarohana Reincarnation
Patrick Henry tsaroana tamin'ny fanambarana nataony hoe: "Omeo fahalalahana aho, na omeo ahy ny fahafatesana." Nahagaga ahy fa io fihetsika io dia nitazona ny filozofia politika Ron Paul, izay nanambarany fa ny olom-pirenena dia tokony afaka miaina ny fiainany amin'ny fahalalahana, tsy misy fitsabahan'ny governemanta.
Nanamarika ihany koa aho fa ao anatin'ireo sary mihetsika, dia misy fitoviana mampiavaka an'i Henry sy i Paul, anisan'izany ny fifampiarahabana momba ny volomaso. Nandritra ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re dia nanamafy fa i Patrick Henry dia niorina tamin'ny Ron Paul.
Ron Paul no rain'ny Senatera Amerikana Rand Paul.
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Ny fitoviana mazava, ny mason-tsivana ary ny rehetra, dia hita eo amin'i Patrick Henry sy i Ron Paul.
Innate Talent: Samy nitondra fiatraikany ara-politika lehibe i Henry sy i Paul hampiroborobo ny hasin'ny "Fahafahana."
Fanavaozana ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fanambadiana: Amin'ny alàlan'ny asa politikany, i Ron Paul dia tafaraka tamin'ny Revolisionera Amerikana hafa indray, toa an'i Bill Clinton, Al Gore ary George W. Bush. Ireo tranga ireo dia asongadina ao amin'ny bokiko, ateraka indray ary Fiverenan'ny revolisionera.